Palmiye Garden Hotel 3 * (Turkey / Side) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Omunye izifunda endala futhi ezithakazelisayo kakhulu-Republic of Turkey kuyinto Side. Minyaka yonke ke edonsela eziningi izivakashi ezivela emakhoneni ezahlukene zomhlaba. Basuke bakhangwa ukuthi langa isimo sezulu sendawo, khona ezikhangayo emlandweni futhi yokwakha ezithakazelisa kakhulu, kanye nokukhethwa olukhulu amahhotela nokuzijabulisa yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Uma nawe sinqume ukuchitha iholide lwakho Side, Palmiye Garden Ihhotela kuyoba ungumuntu omuhle ukonga for ukuhlala kwakho. Sinikeza namuhla ukuthola leli hhotela eduze ukuthola ukuthi linikeza izihambi, futhi ngaleyo ntengo. Futhi, sizozama ukuhlunga ukuthi uhlale uhlobo umbono kwesokunxele bakithi lapha.
Three-star hotel "Palmiye Garden" itholakala ebangeni nje elingamakhilomitha amabili ukusuka enkabeni yalo esifundeni spa - emzini Side. Omunye umuzi owaziwa ugu - Manavgat - asuswe ehhotela ngu amakhilomitha eziyisishiyagalombili. Ngokuphathelene esikhumulweni sezindiza esiseduzane, itholakala kwi amakhilomitha 65 yebanga, e Antalya. Ngemva kokufika endleleni emoyeni imbobo ehhotela kuzokusa isikhathi esingaphezudlwana kwehora. Isici esibaluleke kakhulu lapho ekhetha indawo yokuhlala eTurkey ukusondela kolwandle. Ihhotela "Palmiye Garden" isusiwe ebhishi, isigamu sekhilomitha. Ngakho, indlela eya ebhishi kukuthatha hhayi ningi than ngekota yehora.
Ihhotela "Palmiye Garden" (Turkey, Side) izithombe, incazelo
Lesi sakhiwo ihhotela wavulwa muva - ngo-2013. Siqukethe umzimba omkhulu a emabhuloki lamane kanye ezintathu ezengeziwe. Sekukonke kukhona 102 amakamelo, kuhlanganise: ejwayelekile kanye namakamelo omndeni kanye amakamelo ngokukhethekile ahlomele izivakashi ekhubazekile ukhululekile. endaweni Private ehhotela incane, futhi endaweni yayo Imininingwane kuyinto 1,700 square metres. Nokho, kuzonisiza bona ilingane enkulu ongaphandle indawo yokubhukuda, amaslayidi amanzi, indawo yokudlela, nemishayo, isikhungo ukuqina, Hammam kanye sauna. Ukuzijabulisa okuningi zingatholakala ogwini, ifakwe into edingekayo amanzi ezemidlalo. Sekukonke, ihhotela Palmiye Garden Hotel 3 * okukhethwa kukho esihle kakhulu ukhululekile iholide ukonga njengoba umkhaya onezingane babo bonke ubudala, futhi izinkampani ezincane noma imibhangqwana.
Njengoba iningi nezinye izakhiwo ehhotela emhlabeni wonke, "Palmiye Garden" unesikhathi esibekiwe ngoba check-in futhi izivakashi phuma. Ngakho, inani labantu abahlala zivakashi eyenziwa kusukela lesibili ntambama, futhi siphume kulelo gumbi Mhlazane kufanele kube kwaze kwaba semini. Nokho, uma uza ehhotela ngisemncane kakhulu, ekuphathweni uyokwenza konke okusemandleni ukuze kuxazululwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kodwa ngesikhathi "isizini okusezingeni eliphezulu" kunezimo lapho izivakashi odlule engakabi nayo isikhathi basishiye, futhi ngokufanelekile, izintombi zasemizini ayikwazanga ukulungiselela ngendlela ukuze kube ukufika. Kulokhu, uzonikezwa ukushiya izinto besiyoba sikhulu yokugcina egumbini imithwalo kanye ukungcebeleka ngokusebenzisa ensimini ka Palmiye Garden Hotel, thatha idiphu aqabulayo echibini, uhlale yokudlela noma ukuya ngqo ebhishi eliseduze.
Ngosuku kokuhamba ngesikhathi okhiye edilini lomshado kuyodingeka ucabange nangezilaleli ukukhokhela izindawo zokuhlala. Uma ibibhukelwe uhambo ngokusebenzisa inkampani yokulungisela abahambayo futhi Usuvele ukhokhele kuye izindleko egcwele yokuhlala, ehhotela uzobona kuphela zikhokhela amasevisi elihunyushwe amasevisi angeziwe, uma usebenzisa lezo. Ngokuphathelene nokubekwa izingane, ihhotela yokuhlala kuphela iyakwamukela izivakashi nezingane bobudala obungefani. Uma zisetshenziswa ukuhamba kulo iviyo umngane zemilenze emine, ngakho-ke kungenzeka uyibeka ehhotela ayacelwa ukubuza ekuphathweni.
Njengoba kushiwo ngenhla, Palmiye Garden Ihhotela (Turkey) has 102 amakamelo elise ikakhulukazi ezine-umzimba futhi ezintathu ezengeziwe, futhi amane, amabhlogo. Kuzo zonke izakhiwo for the lula izivakashi kukhona zommbila. Ihhotela zamagumbi emelelwa izigaba ezilandelayo amakamelo: 92 okujwayelekile (indawo 22 square metres), imikhaya ayisishiyagalolunye (36 square metres) futhi ekamelweni elilodwa wahlomisa ngokukhethekile ukuhlalisa abantu abanokukhubazeka.
Kungakhathaliseki isigaba, wonke amagumbi e-Palmiye Garden Hotel 3 * anemisila air conditioning, minibar, yokugezela yangasese elineshawa futhi hairdryer, flat-screen TV futhi ngocingo, kukhona izindawo zokungena Inthanethi. Ukuze uthole imali eyengeziwe zamaRandi lamabili ngelilanga ungasebenzisa e-room ephephile. Ukuhlanza lamakamelo nsuku zonke. Amathawula nezincekukazi nelineni washintsha kabili ngesonto. ku imali ngesisekelo nganoma yisiphi isikhathi sosuku, ungakwazi oda ikamelo inkonzo.
Ukudla: zokudla, libhala
Amandla e ehhotela ezintathu-star Palmiye Garden Ihhotela ihlelwe 'ol okufakayo "uhlelo (" zonke okufakayo "). Yokudlela eyinkimbinkimbi ehhotela kusukela nge-iri lobunane ekuseni kuze leshumi kusihlwa wakhonza lezitsha nge lokuqala nelesibili izifundo, appetizers kanye nama-dessert kusuka ukudla okuhlukahlukene-Turkish ngamazwe. Ngaphezu kwalokho, imigoqo yehhotela, lapho ingelashwa nge iziphuzo wendawo mahhala neziphuzo angaphandle ngemali eyengeziwe.
Garden Ihhotela Palmiye Ihhotela (Side, Turkey) ivuliwe umusho wesibili, hhayi ebhishi yangasese. Beach eliseduze esuswa kuwo kuya ibanga kwamamitha 500 futhi kuyinto kamasipala. Yena isihlabathi futhi amatshe. Kukhona imibhede, omatilasi, izambulela kanye into edingekayo emisebenzini amanzi kanye nemidlalo. Sebenzisa kuzo zonke imishini lolwandle kwenkokhelo.
Esizeni "Palmiye Garden" sibonisa ivulekile ongaphandle indawo yokubhukuda ifakwe amaslayidi amanzi. Eduze kwakhe kukhona uyilanga ithala lapho ihhotela izivakashi ukuthamela ilanga kusukela induduzo lounger ilanga. ibha ZOKUBHUKUDA, lapho ungakwazi zithokozise isiphuzo.
Uma ufuna eminye umsebenzi, kungenzeka ukudlala table tennis kanye ejimini. Ngaphezu kwalokho, Palmiye Garden Hotel 3 * has a spa lapho ungakwazi uphumule sauna, okugeza Turkish (Hammam) noma massage. Ukuze kube lula izivakashi omncane eziyinkimbinkimbi ihhotela on insimu yalo kukhona inkundla yokudlala kanye pool engajulile lapho izingane kungaba frolic ngokuphepha emanzini acwebile.
Ukuze kube lula, ezintathu-star Hotel "Palmiye Garden" (Side, Turkey), ukwamukela usebenza ubusuku nemini lapha. Ngakho-ke, uma noma ngasiphi isikhathi sosuku noma ebusuku unombuzo ukuphokophela, ungahlala uxhumane nomphathi edilini lomshado. Lapha ungakwazi ukusiza nge exchange, ukuqasha imoto noma ukubhuka uhambo ezithakazelisayo. Ngaphezu kwalokho, ihhotela Palmiye Garden Ihhotela for imali eyengeziwe unikeza isevisi Shuttle kusukela / kuya sezindiza. On isidingo le sevisi ayacelwa ukwazisa abaphathi futhi bathole isiqinisekiso ezivela kuye.
Ukuze abahambi uhlela usuphumule ku imoto yakho siqu noma ukuqasha imoto kakade e-Turkey, in the eziyinkimbinkimbi ehhotela has a ivulekile yokupaka. Ngakho awunankinga yokupaka lapha ngeke kuphakama. Njengoba amasevisi ezengeziwe ehhotela, ungathatha izinto Ilondolo kanye nezakhiwo ezomile yokuhlanza amasevisi, igumbi ukuze inkonzo, kanye nesidingo okubiza udokotela. Ngaphezu kwalokho, eziyinkimbinkimbi ehhotela kukhona futhi ifakwe yonke igumbi kudingekile inkomfa lapho ungakwazi ukubamba umhlangano ibhizinisi, kulomhlangano noma eminye imicimbi ibhizinisi.
"Palmiye Garden" (Turkey, Side): intengo yokuhlala
Njengoba lena ehhotela ezintathu-star, izindleko yokuhlala kuba ngokwanele yeningi. Ngakho, indawo egumbini ejwayelekile liyakunikhulula emuva phakathi $ 1287 ruble ubusuku ngabunye, futhi umndeni - ruble 1660.
Izibuyekezo Ihhotela "Palmiye Garden"
Njengoba iningi lezihambi ukukhetha ihhotela vacation, ngokusekelwe hhayi kuphela incazelo yalo, kodwa futhi phezu amazwana abantu baye bavakashela ke, thina ngokufingqiwe izimpendulo bakithi abahlala kuleli hlobo e-Palmiye Garden Hotel 3 * (Side). Ngokuvamile singasho ukuthi iningi izivakashi bathandile ehhotela. Ngokombono wabo, kuba uhambisane kokubili incazelo zalo ezishiwo value. Manje siphethe ngaphezulu sokulungisa imininingwane.
Ngokuqondene amakamelo, iningi abahambi Akabonisanga ukunganeliseki yokuhlala. Nokho, ezinye zezivakashi ayenganelisekile nge izinga abampofu yokuhlanza endlini yokugezela, ukukhanyisa abampofu futhi umsindo. Le ndawo ehhotela kwakubonakala izivakashi akwanele. Nokho, labo abeza iholide nezingane, Akazange akhononde, ngoba izingane zabo zazihlale emehlweni.
Manje cabanga umbuzo kwamandla. Ngokuvamile, iningi izivakashi Awekho izikhalazo mayelana nekhwalithi ukudla sekungasekho. Yiqiniso, uhla izitsha wayengekho ezihlukahlukene kakhulu, kodwa esimweni esinjalo ngempela evamile ehhotela ezintathu-star. Into esemqoka ukuthi konke lapha kwaba ngempela esihlwabusayo ezidliwayo, ngakho-ke akazange ahambe olambileyo. Into nje kancane udidekile ezinye izakhamuzi zethu nabo - akuyona njalo izitsha ezihlanzekile in the restaurant. Nokho, izivakashi kungaba njalo esikhundleni amapuleti noma izibuko on enetheni. Enye kusimo, okuyinto agcizelele emazwini abo amanye amaholide okuncane kakhulu kwasemini-amabhokisi, okuyinto zazingase zithathwe ehhotela, uma uya ekuseni sokuboniswa isakhiwo. Ngakho, ngokuvumelana abahambi, sidla ukudla kwasekuseni ngakho omdala engenakwenzeka.
Kepha ebhishi-ke, njengoba kushiwo incazelo, kuba kude Palmiye Garden Hotel 3 * (Turkey) ambalwa amamitha. Kulokhu, indlela kufanele kusishukumisele sasivumela matasa endleleni. Ngokuvamile, umgwaqo lolwandle kuzokusa hhayi ningi than ngekota yehora. Kodwa nakhu ngemuva kuyomelwe baye eside, njengoba kuyodingeka igquma kunalokho emaweni, kungase kungabi ejabulisayo nethokomele ngemuva kosuku wachitha ogwini njalo. kakhulu esifanayo beach ngempela ehlanzekile uwuhlomele kahle.
Ezinye beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni badumala kancane nge ukuzijabulisa ezihlongozwayo. Ngakho, abanye babo bakhononda ngokuntuleka animation kanye ema-disco. Ngokuqondene izithombe izingane, njalo ebusuku kuyinto mini-disco owawuse, lapho kokubili abasha ehhotela izivakashi, kanye nabazali bazo ngempela ajabule.
Kunalokho amazwana eziphikisa ezihlobene Abaqondisi bethu nabo Ihhotela "Palmiye Garden" (Side, Turkey). Ngakho, abanye abahambi bathi isimo sengqondo senhlonipho futhi anake kwabo, kuyilapho ezinye izivakashi zithi abasebenzi zavumela ukwelashwa okungalungile ngisho boorish kibo. Ikakhulukazi, izigameko ezinjalo kwakucatshangwa exhumene izikhalazo mayelana umsindo ekamelweni futhi izicelo yawoyise izakhamizi egumbini ethule.
Kufinyeta, kungase kuqashelwe ukuthi izivakashi eziningi basutha nokukhetha yabo ehhotela. Ngakho, ngokombono wabo, ehhotela inkanyezi ezintathu "Palmiye Garden" e Side (Turkey) ine inhlanganisela kahle intengo nekhwalithi. bakithi musa siqambe ephindela leli hhotela kanti bancoma abangane nezihlobo njengoba ezinhle inketho isabelomali iholide ogwini-Republic of Turkey.
Novia Lucida Beach 5 * (Turkey, Kemer, Camyuva): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Brisas Del Caribe: ngezibuyekezo nezithombe zezivakashi
Castella 1 *, Spain - izithombe, amanani, kanye nokubuyekeza zezivakashi ezivela eRussia
Wolfenstein: The New Order. Akukona ukuqala umdlalo
Namaphesi Dudu: rainbow isimo in umklamo okusebenzayo kanye yesimanje
Yini ulimi izimbali
Bright nail design: ongakhetha imfashini
Sibhedlela "Katun", Belokurikha. ukwelashwa Spa sanatoriums Altai
Owesifazane Sagittarius, indoda-Virgo kwedivayisi abhanqiwe
Ingenue - indima intombazane ukuzikhohlisa
Antiseptic ukhilimu ingono "Medela Purelan": incazelo, ukwakheka, kanye nokubuyekeza